UCottages,Com unezimvo eziyi-2146 zezinye iindawo.
-Ukupaka (iimoto ezi-2)
-I-DVD (ithala leencwadi elincinci kwiRef ISR)
. I-Bickley School House ikwindawo efanelekileyo ukuze yenze iziko eligqibeleleyo lezinto zangaphandle, ukuba yinxalenye yeNorth Yorkshire Moors kwaye ikufutshane kakhulu neDalby Forest. INdlu yeSikolo ehlaziyiweyo (Ref ISR) ibangela umdla kunye nesimilo kwaye iSihlomelo seSikolo (Ref ISS) sinomgangatho omnye. Iipropathi ezivaliweyo zeeholide zijikelezwe kukuhamba kwemithi ezukileyo kunye nemisebenzi efana nentaba kunye nokuwela ilizwe ngebhayisikili, ukuloba kunye nokukhwela ihashe zonke zikhona. Thatha iDalby Forest Drive ukonwabele indawo entle. I-Elegant Scarborough yi-10 yeemayile, izibuko lembali laseWhitby ziikhilomitha ezingama-20-zombini zibonelela ngeelwandle ezinesanti. Kukho ukufikelela lula kwiNorth Yorkshire Moors National Park kunye nesixeko sakudala esibiyelwe ngodonga saseYork; ukuqhuba okufutshane kwi-Flamingo Land theme park kunye ne-zoo. Iivenkile 8 imayile, pubs 5 miles.
Izimvo eziyi-2 147